Akụkọ - structurelọ nkwakọba ihe nchara ụlọ
A na-ejikọ ụlọ nkwakọba ihe ígwè na usoro nchara ígwè, gụnyere ogidi ígwè, ogwe igwe, purlin na ihe ndị ọzọ. Ihe ndị a bụ isi mejupụtara usoro nkwakọba ihe. N'ihi ibu dị mfe na ịrụ ọrụ dị mfe, a na-achọ nnukwu ụlọ nkwakọba ihe ígwè. Nchara strucutre bụkwa ụdị ụlọ kachasị akwụ ụgwọ maka ọtụtụ ọrụ. Yabụ, oge eruola ka itinye ego na ụlọ nkwakọba ihe nchara site n'echiche akụ na ụba ogologo oge.
Nkọwa ụlọ nkwakọ ngwaahịa ígwè
A na-ahụkarị ngwongwo nchara dịka ụzọ kachasị mma na ụzọ kachasị ọsọ iji wuo ụlọ nkwakọba ihe gị, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ kachasị elu maka ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ obodo. Anyị na-enye nhazi ụlọ nkwakọba ihe ígwè, ma dabere na ngwa gị na nkọwa gị, a ga-emepụta akụkụ nchara n'ụdị na nha dị iche iche.
Lọ nkwakọba ihe nchara bụ ụdị ụlọ etiti, nke ihe etiti ahụ mejupụtara ogwe igwe na ogidi. Ngwurugwu nchara nwere ike ime site na ikpo oku ma obu oyi. Maka ụlọ elu na mgbidi, anyị na-enye mpempe akwụkwọ nchara, eriri iko, PU sandwich panel nhọrọ na na. Ọdịdị dị n'elu ọla arụ dịkwa akụkụ dị mma maka ọrụ gị. Ọnụ ụzọ na windo nke ụlọ nkwakọba ihe nchara nwere ike ịbụ nke PVC ma ọ bụ alloy. Banyere usoro nkwado purlin, mgbidi na elu purlin, ụdị C na ụdị Z dị maka ịhọrọ ịhọrọ. Tụkwasị na nke ahụ, a haziri ụgbọ okporo ụzọ kreenu dị ka ihe ị na-etinye n'elu crane.
Banyere ihe ị chọrọ maka ụlọ nkwakọba ihe nchara yana ọnọdụ nke gburugburu ebe obibi, enwere ike ịmepụta ụlọ nkwakọba ihe n'ụdị ọ bụla na nha iji kwado mkpa gị.
Gịnị Mere I Ji Kwesị Choosehọrọ Nhazi Steelgwè?
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ị ga - eji họrọ igwe maka ụlọ nkwakọba ihe.
1.Cost ịrụ ọrụ nke ọma. E jiri ya tụnyere ụlọ ndị e ji rụọ ụlọ, ụlọ nkwakọba ihe nchara na-efukarị obere ego. A ga-arụpụta ihe niile dị na ụlọ ọrụ ahụ, gụnyere ịme mkpọpu mmiri, ịcha na ịgbado ọkụ, wee wụnye ya na saịtị ahụ, yabụ ọ ga-ebelata oge iwu ihe.
2.Oke ka ike. Ngwurugwu ígwè ahụ na-eji ihe eji eme ihe ma ọ bụ nke nchara ígwè, nke nwere ike dị elu na nguzogide ala ọma jijiji na-anọchi ihe ndị siri ike.
3.Echebe gburugburu ebe obibi. Warelọ nkwakọba ihe nchara eji arụ ọrụ bụ ihe omume gburugburu ebe obibi dịka enwere ike iji ya rụọ ọrụ ndị ọzọ, yabụ ọ ga-ebelata mkpofu ihe owuwu.
4.Easy echichi. Canlọ nkwakọba ihe ndị a nwere ike ịgbakọ ma wuo ndị ọrụ ahụ ngwa ngwa, si otú a na-azọpụta ndị ọrụ aka na ụgwọ ọrụ.
5.High anwụ ngwa ngwa. Ngwurugwu nchara nwere ike iguzogide ọnọdụ gburugburu ebe obibi siri ike, yana site na mkpuchi na agba ọkụ na aluminom, ọ ga-egbochi ọkụ na nchara nchara. Ya mere, ọ nwere ogologo oge ọrụ ndụ.
6.High ntụkwasị obi. Ngwurugwu nchara nwere ike iguzogide mmetụta na ibu dị ike, yana iji arụmọrụ seismic dị mma. E wezụga nke ahụ, nhazi nke ígwè ahụ bụ otu.
Post oge: Apr-01-2020